Ngokuka-Fortune, i-Apple yinkampani yesine kwihlabathi kwinzuzo | Ndisuka mac
Ngokuka-Fortune, i-Apple yinkampani yesine kwihlabathi kwinzuzo
Njengonyaka wonke ngeli xesha, uFortune usungule uluhlu lweenkampani ezingama-500 ezinenzuzo kwihlabathi liphela. I-Apple, kunokwenzeka njani ukuba ingekho, ikwi-5 ephezulu yolu luhlu. Ngokukodwa ukwinqanaba lesi-4 ngokweenzuzo ezifunyenweyo. Ngokubhekiselele kwinqanaba lehlabathi, kuzo zonke iinkampani, kusekwe kwindawo yeshumi elinesibini. Njengesiqhelo, inani lokuqala lihlala eWalmart.
I-Apple yinkampani ephumeleleyo. Hayi kwinzuzo okanye kwintengiso yezixhobo. Yinkampani efezekisa amanqanaba aphezulu kakhulu olwaneliseko phakathi kwabathengi bayo. Kwi-Fortune, unyaka ngamnye kwiinkampani ezihlalutyiweyo zinikwa isikhundla ngokusekwe kwiinzuzo zazo. Ngokusekwe kule meko, iApple igqibile kwindawo yesine, ngasemva kwe-Exxon Mobile. Oku kubonisa ukwehla kwesikhundla esinye, xa kuthelekiswa ne-2019.
Ngokwemigaqo yehlabathi, iApple ikuluhlu lweThamsanqa, kwindawo yeshumi elinesibini. Nangona inkampani yenze i-55 yezigidigidi zeedola, kuye kwakho ukwehla kwintengiso yee-iPhones (14%) kwaye nangona zinxitywa (ii-AirPods kunye neeWotshi) kunye nezinye izinto ezingezizo ezomnxeba (iiPods, iiHomePods kunye neemveliso zeBeats) zonyuke nge-41%, zimele kuphela 9% yetotali iyonke.
I-Apple kusafuneka ibenkulu njengeWalmart, ebikade ingaphezulu kolu luhlu iminyaka esi-7 ilandelelana. Zombini izibonelelo kunye nehlabathi jikelele. Kodwa, gcinani engqondweni ukuba inkampani yeapile ibikolu luhlu iminyaka esixhenxe. kwaye uhlala ngaphakathi kwizikhundla eziphezulu ezingama-20.
Kuya kufuneka silinde kude kube lonyaka olandelayo ukuba uluhlu luphinde lukhutshwe kwaye sibone ukuba inkampani iguquka njani. Nangona ndiyoyika izinto aziyi kwahluka kakhuluo ngenxa yeCoronavirus kunye nengxaki yezoqoqosho kwihlabathi jikelele apho sitshone khona ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngokuka-Fortune, i-Apple yinkampani yesine kwihlabathi kwinzuzo
I-Beta ye-Beta yoluntu ka-7 ngoku iyafumaneka
Ijenali yeWall Street ijonge umsebenzi kaTim Cook eApple